Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Iza amin'ireo valan-javaboary amerikana no tena ankafizin'ny fianakaviana?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fikarohana vaovao dia manambara ny valan-javaboary be mpankafy indrindra any Etazonia, miorina amin'ny lafin-javatra toy ny hektara isaky ny mpitsidika, 'tsara ho an'ny ankizy manintona, ny natiora sy ny valan-javaboary, ny mari-pana isan-taona sy ny rotsakorana.
Ny Nosy Virgin dia valan-javaboary tsara indrindra ho an'ny fialantsasatra ho an'ny fianakaviana any Etazonia.
Ny Redwood any California dia mitana ny laharana faharoa, miaraka amin'ny isa 6.30 amin'ny 10.
Maka ny laharana fahatelo i Big Bend Texas miaraka amin'ny isa 6.26 amin'ny 10.
The USA dia trano fonenan'ireo valan-javaboary malaza indrindra eto an-tany, tonga lafatra ho an'ireo fianakaviana tia mivoaka amin'ny natiora ary mijery ny hakanton'ny voajanahary ao amin'ny tanindrazany.
Saingy ny valan-javaboary amerikana iza no tsara indrindra hitsidihan'ny fianakaviana?
Ny valan-javaboary amerikana 10 tsara indrindra ho an'ny fianakaviana
laharana National Park Fanjakana / faritany Isa ankapobeny ho an'ny fahasamihafan'ny fianakaviana
1 Virgin Islands Nosy Virijiny Amerikana 6.58
5 tohany Utah 6.20
6 Tendrombohitra Guadalupe Texas 6.14
9 Black Canyon an'ny Gunnison Colorado 6.09
9 Farihy Clark Alaska 6.09
Ny Nosy Virgin dia valan-javaboary tsara indrindra ho an'ny fialantsasatra ho an'ny fianakaviana any Etazonia, miaraka amin'ny isa 6.58 amin'ny ankapobeny 10. Miaraka amin'ny mari-pana faharoa 79.2 sy 55% ny fisarihana voatanisa tsara ho an'ny ankizy.
Redwood any California dia tonga faharoa, miaraka amin'ny isa 6.30 amin'ny 10, manana ny isan-jato isan-jato indrindra ho an'ny ankizy amin'ny 80% ary koa ny 100% amin'ireo manintona voatanisa ho zaridaina & valan-javaboary.
Ny toerana fahatelo dia Big Bend Texas miaraka amin'ny isa 6.26 amin'ny 10, miaraka amin'ny 67% amin'ireo manintona voatanisa ho toy ny natiora & valan-javaboary ary maripana isan-taona 71.4.